Walaal News Network 24
Ka dhageyso Wararka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, ayaa dhagax dhigay dhismaha Dekedda Hobyo iyo waddo laami ah oo isku xiri doonta magaalooyinka Hobyo, Cadaado iyo Caabudwaaq. Madaxweynaha oo uga mahadceliyey shacabka isugu soo baxay soodhaweyntiisa ayaa sheegay in Hobyo oo deked ay saldhig u noqoneeyso horumarka…
Golaha Horumarinta Qorshaha Qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta shirkooda caadi ahaa ee bishii mar ay isugu yimaadaan ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ka soo qeyb galeen Wasiirada Qorsheynta Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka iyo Dowladda dhexe. Waxaa kullanka diiradda lagu saaray Qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hanaanka wadajirka…
Daawo: Madaxweyne Farmaajo “Jamacaddani waa in ay horseed u noqotaa nabad buuxda oo ka hirgasha Galmudug”
Sawiro: Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir oo la kulmay guddoomiyihii hore
C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow) Guddoomiyaha cusub ee maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa xalay hoygiisa ku booqday Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed. Waxaa ku wehlinayay Guddoomiye Eng. Yariisow booqashadiisa Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow(Ducaale), Wasiirka Boostada Eng. Cabdi Cashur, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo uu ka…
Daawo: Gudomiyaha hore ee Gobolka Banadir Taabit oo sheegay waxyabaha xilka loga qaday ogoladay xil ka qadista
Daawo: Gudoomiyihii hore koox taabacsan oo soo saaray Warsaxafadeed oo ay ku taageerayaan
January 22, 2018 in Muuqaalka Wararka.
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay magalada Caabudwaaq iyo hadaladii uu ka jeediyay
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay Degmada Xeraalle iyo hadladii uu ka jeediyay
January 21, 2018 in Muuqaalka Wararka.
Wasiir ku xigeenka W/faafinta XFS oo xarigga ka jaray Warggeyska Dalka dib u howlgelin lagu sameeyey
Waxaa maanta munaasabad kooban oo xarigga looga jarayay Warggeyska Dalka oo dib u howlgelin lagu sameeyey ayaa ka dhacday xarunta Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska,waxaaan ka qeybgalay Wasiir ku xigeenka Warfaafinta ahna sii hayaha xilka Wasiirka Mudane C/raxmaan Iidaan Yoonis,Agaasimaha Guud ee Wasaardda iyo agaasimayaasha Waaxyaha Wasaaradda qaarkood. Agaasimaha guud ee Wasaaradad Warfaafinta Mudane…
January 21, 2018 in Wararka.
Madaxwenaha JFS oo xilalkii u magacaabay Gudomiyaha Gobolka Banadir iyo ku xigeeno cusub
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhaw wareegto uu soo saaray u magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow oo horay u ahaa Wasiirka Warfaafinta, iyadoo dhamaan xilalka laga qaaday xubnihii hayay xilka Guddoomiye ku-xigeenada iyo Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobolka. Akhriso Wareegtada ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha:- Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya,…
Daawo: Madaxwayne Biixio oo ka hadlay Siyasada Xisbiyada mucaradka Somaliland iyo arinta deganka Tukaraq
January 20, 2018 in Muuqaalka Wararka.
Daawo: Dowladda Soomaaliya oo ku guulaysatay in dalka dib ugu soo celiso qeyb ka mid ah maxaambiistii ku xirneyd Dalka India
Guddoonka Golaha Shacabka go’aan ka garista maqaamka Caasimadda oo go’aan Ka soo saaray
Guddoonka Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warqad xafiiskooda ka soo baxday ayaa go’aan uu soo saaray maanta kaga hadlay cida iska leh go’aan ka gaarista maqaamka caasimadda Dalka. Guddoonka Golaha Shacabka ayaa ku baaqay in la dhowro dastuurka iyo Dowladnimada,ka go’aan gaarista maqaamka Caasimaduna ay tahay awood gaar u ah Baarlamaanka Hoose ka aqriso…
January 20, 2018 in Wararka.
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu geystay Dalka Canada
Magaalada Tronto ee Dalka Canada ayaa waxaa ka dhacay weerar lagu dilay 2 dhalinyaro ah oo mid ka mid ah uu yahay Soomaali, weerarkan oo dhacay Xalay saqdii dhexe ayaa sidoo kale lagu dhaawacay labo kale oo uu mid yahay Soomaali kadib markii kooxo hubaysan ay rasaas ku fureen dadkaasi. Labo qof ayaa ku…
Howlgalo lagu Dilay Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad Shabaab ka tirsan
Wasiirka Amnigga Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo Shir Jiraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa Xaqiijiyay in 38 ka Tirsan Maleeshiyadda Al-Shabaab lagu dilay hawlgallo 24-saac ugu dambeyay ka dhacay deeganada Beerxaani, Kaamjaroon, Araare iyo Jamaamme. Wasiirka oo la hadlay Jubbaland Tv ayaa sheegay in hawlgaladdu sii socon doonan,ilaa maleeshiyada Alshabaab laga…
Daawo dhismaha Ciidamada Badda Soomaaliyeed oo meel fiican maraysa